Indlu yaseMartyn Lane - I-Airbnb
Indlu yaseMartyn Lane
I-Martyn Lane Country Cottage
Indawo - Sikumakhilomitha angu-1.5 phansi komgwaqo othulile ophuma ku-Bass Highway ozungezwe ihlathi le-peppermint kanye nepulazi.
Indawo enhle emaphakathi kuphela imizuzu eyi-10 ukuya emabhishi, amathilomu nezitolo zase-Inverloch kanye nemizuzu emi-5 ukuya eWonthaggi, isikhungo esikhulu sezitolo saseNingizimu Gippsland.
Sicabanga ukuthi sinomhlaba omuhle kakhulu womibili lapha e-Martyn Lane - yonke intokozo yempilo yezwe ngokufinyelela okusheshayo nokulula emabhishi namadolobhana aseNingizimu Gippsland.
I-Wilson's Promontory National Park kanye ne-Phillip Island kokubili kuwuhambo olulula losuku futhi kuhlakazeke kuwo wonke amagquma aseNingizimu Gippsland kunezindawo zewayini, amadolobhana amancane, amakhefi, izimakethe zabalimi, imizila yesitimela namathrekhi okuhamba, amabhishi okuntweza kanye nezitolo zezandla.
Ikotishi lezitini zodaka kanye nesibopho sombala linamabhentshi namatafula enziwe kabusha. Ungase uthole amazwibela ama-wallabies awela ezihlahleni futhi ujabulele imigilingwane yokugeza izinyoni yabantu bendawo efasiteleni lasekhishini.
Indawo eqoshiwe yangasese ngaphandle kwendlwana ine-brazier yama-bbqs alula noma ama-marshmallows athosiwe ngaphansi kwezinkanyezi. Noma ungasebenzisa i-Weber BBQ.
Iqukethe indawo yayo yokungena nendawo yokupaka izivakashi ungeza futhi uhambe ngokuthanda kwakho. Indlu yethu ibekwe ngokuphambene ngakho siyasebenza uma udinga usizo oluthile, kodwa sizohlala sihlonipha ubumfihlo bakho.
Ingaphakathi lakhiwe njengefulethi elikhulu lesitudiyo elinendawo yokudlela ehlangene kanye nendawo yokulala. Kukhona igumbi lokuhlala elihlukile elinesofa elinethezekile kanye nehitha yokhuni ukuze uhlale uthokomele ngobusuku obubandayo. Igumbi lokugezela elilingana ne-ensuite linegumbi elincane elihlukene elihlukene lokugcina izingubo nezikhwama zakho zokuhamba.
Ikhishi lihlome ngokuphelele.